Parsnip | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny zava-drehetra tokony ho fantatrao amin'ny fitomboan'ny parsnip avy amin'ny voa eny an-tsaha
Eo anivon'ny zaridaina dia misy ny fiheverana fa sarotra dia sarotra ny fitomboan'ny parsnip avy amin'ny voa. Ary ny zava-drehetra satria kely dia kely ny vokatra voajanahary - mihoatra ny 50%. Heverina fa nomena lanja goavam-be tamin'ny solika izy io. Ankoatr'izany, afaka mitahiry tsy mihoatra ny herintaona izy ireo. Na izany aza, raha mahatsapa ireo endri-javatra ireo ianao ary mifantoka tanteraka amin'ny teknolojia momba ny fambolena, dia azonao atao ny mahazo valiny.
Sakafo fanangonana parsnip ho an'ny ririnina
Tahaka ny zavamaniry maro hafa, ny parsnip dia nalaza hatramin'ny fananana tombontsoa manokana na mety ho fanasitranana mihitsy aza. Izany dia nitarika ny fisian'ny fomba maro tamin'ny fiomanana. Ny sakafo ho an'ny Parsnip dia tena mahaliana ny olona mijaly amin'ny aretina ao amin'ny fo, ny fantson-dra sy ny taova ao amin'ny rafi-pandaminana. Ankoatra izany, ny zavamaniry voatondro dia diabetika ary izy no mpanampy voalohany ho an'ny colic, ary matetika ny olona sasany no mampiasa izany na dia ny fisorohana ny baldness aza.
Pasendaka legioma: toetra mahasoa sy fanoherana
Pasternak dia iray amin'ireo legioma fototra malaza indrindra any amin'ny faritra misy antsika. Ity legioma ity dia faritana amin'ny fianakaviana Umbrella. Ny mponina ao aminy dia ampy ho azy, miaraka amin'ny karazam-pahamarinana tsy manam-paharoa, mahatonga ny parsnip ho tena ilaina amin'ny lafiny maro amin'ny fiainan'ny olombelona: ny sakafo, ny pharmacology mahazatra ary ny fitsaboana nentim-paharazana, ny cosmetology.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Parsnip